Iindaba-Bhiyozela uVulo oluKhulu lweVenkile yeManx Guangzhou
Bhiyozela uVulo oluKhulu lweVenkile yeManx Guangzhou
NgoJulayi 1, umbono weshishini lokuthunga waphinda wagxila eGuangzhou, isixeko esidumileyo seempahla eChina. Ngaloo mini, yayiyimini enkulu kumzi mveliso. Ivenkile ekhethekileyo yomatshini wokuthunga waseGuangzhou Xiaoping kunye ne "Xiaoping inaliti yedolophu yemoto" ivulwe kwangalo mini, kwaye bonwabile kwaye babhiyoza.
Umnumzana Mao Xiaoyong, ongusihlalo we Zhejiang manks wokuthunga umatshini Co, Ltd., njengommeli kuphela omenyiwe womenzi, weza kwindawo yesehlo ukusika iribhoni ukubhiyozela ukuvulwa ngokudibeneyo kwe "manks ivenkile ekhethekileyo" kunye ne "Xiaoping inaliti. isixeko seemoto ”. Abakhoyo kulo msitho ibinguLiang Fuxiang, uMongameli weGuangdong Sewing chamber yegumbi lezoRhwebo, uShao Lishi, usekela-mongameli olawulayo kunye nonobhala jikelele, Mao Shitang, usekela mongameli weShenzhen Garment Machinery Association; U-Wang Hongchen, umphathi jikelele wenkampani yomatshini wokuthunga waseHongxin; kunye nefeni uSijie, umphathi jikelele wesixeko somatshini wokuthunga weXiaoping.
Ngosuku lokuvula, ivenkile ekhethekileyo yomatshini wokuthunga weManx yayigcwele uvuyo kunye nemincili, kwaye iimanks zabonisa iimveliso zothotho “zeLingzhi” zakutshanje ezenziwe ngo-2014. Kwangelo xesha, imisebenzi yokukhuthaza eyaziwayo efana "nokuthenga umatshini omkhulu wokuthunga simahla i-iPhone 5S ”kunye ne" 1 yuan yomatshini "nazo zinikiwe. Kumsitho, abapeyinti bendawo abadumileyo babemenyiwe ukuba bapeyinte esizeni ukubonisa obona buhle "bokupeyinta umbala womzimba" kule hlotyeni, ukudibanisa ubugcisa kunye nenkcubeko kunyuso lweManx.
Phantse ikhulu leevenkile ezikhethekileyo kunye neevenkile eziphambili kwifowuni zoomatshini bokuthunga i-manks ekhaya nakumazwe aphesheya. Ukuvulwa kwevenkile ekhethekileyo yeGuangzhou Xiaoping isixeko somatshini wokuthunga kukwaluphawu lwenyathelo eliya phambili kumgca wokudibanisa itheminali kunye nejelo. Ivenkile yokugcina ayigcini nje ngokulala kumfanekiso webrand kunye nokunyusa, kodwa ikwalungele ukuba abathengi bavavanye umatshini kwaye bajonge iisampulu kwindawo kunye nokubonelela ngenkxaso yenkonzo yokuthengisa emva kokuthengisa. Kuya kufuneka sinike umdlalo opheleleyo kwindima yayo yemitha kunye nefuthe, eliluncedo kumashishini osasazo kunye nabasebenzi bezentengiso ukuseka nokwandisa imarike ejikelezileyo.